बालुवाटारमा बन्यो डा. केसीलाई बलपूर्वक काठमाडौं ल्याउने योजना — Hamro Sanchar
आज : २०७५ आश्विन ४ गतेPreeti to UnicodeUnicode to PreetiRoman to UnicodeDate Converter
बालुवाटारमा बन्यो डा. केसीलाई बलपूर्वक काठमाडौं ल्याउने योजना
हाम्रो संचार संवाददाता प्रकाशित : २०७५/३/२८ गते
काठमाडौं -सरकारले पूर्वाधार लगायतका मापदण्ड पूरा नगर्ने प्रस्तावित मेडिकल कलेजहरुको आशयपत्र खारेज गर्ने भएको छ । तर, डा. गोविन्द केसीको अनसनका भरमा उपत्यकामा मेडिकल कलेज खोल्न रोक नलगाउने प्रष्ट पारेको छ ।
डा. केसी १३ दिनदेखि जुम्लामा अनसनरत छन् । उनको स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन नाजुक हुँदै गएको छ । सरकारले चिकित्सकको टोली पठाए पनि डा. केसीले उपचार लिन मानेका छैनन् भने माग पूरा नभएसम्म काठमाडौं नआउने बताएका छन् ।
चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशकै हुबहु विधेयक ल्याउनुपर्ने डा. केसीको मुख्य माग छ ।
सरकारले भने अध्यादेशको मुख्य बुँदाहरु नै हटाएर विधेयक संसदमा दर्ता गरेको छ । यसको प्रक्रिया बिहीबार नै अघि बढाउने संसदको तयारी थियो ।
तर, शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले सहमतिको प्रक्रियाबाटै विधेयक अघि बढाउन चाहेको भन्दै कार्यसूचीमा नराख्न सभामुखलाई आग्रह गरेका हुन् ।
बालुवाटारमा मध्यरातसम्म बैठक
अनसनरत डा. केसीको जीवन रक्षाको माग गर्दै कांग्रेसले दर्ता भएको जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथि मंगलबार प्रतिनिधिसभामा छलफल भएको थियो ।
तर, सांसदहरु चिकित्सा शिक्षा विवादमा निकास खोज्नु भन्दा डा. केसीको पक्ष र विपक्षमा जुहारी खेल्नतिर लागे । सत्तारुढ सांसदहरुले सरकारको बचाउ गर्दै डा. केसीकै आलोचना गरे भने विपक्षी कांग्रेसका सांसदहरु सरकारको आलोचनामै सीमित भए ।
त्यही साँझ बालुवाटारमा बसेको बैठकमा चिकित्सा शिक्षा विवादको निकासबारे गम्भीर छलफल भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका साथै माथेमा कार्यदलका केही सदस्यसमेत उपस्थित रहेको उक्त बैठकमा जुम्लामा अनसनरत डा. केसीको स्वास्थ्य अवस्थाबारे गम्भीर छलफल भएको थियो ।
जुम्लामा वार्ता हुन्न, काठमाडौं ल्याउने तयारी
काठमाडौंबाट गएका चिकित्सकहरुबाट डा. केसीले उपचार लिन नमानेकाले अब के गर्ने भन्ने छलफल भएको छ । स्रोतका अनुसार डा. केसीको अवस्था बुझ्न टोली जुम्ला पठाउने र आवश्यक भए काठमाडौं पनि ल्याउने बैठकको निश्कर्ष छ ।
त्यसअनुसार नै बुधबारदेखि नै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा नेपाली सेनाको हेलिकोप्टर तयारी अवस्थामा छ । तर, डा. केसीले काठमाडौं जान्न भनेका छन् ।
‘अवस्था गम्भीर नै भयो भने सरकारले बलपूर्वक काठमाडौं ल्याएर भए पनि उपचार गराउँछ । डा. केसीको जीवन रक्षा गर्न सरकार प्रतिवद्ध छ ।’
बैठक स्रोतले भन्यो, ‘अवस्था गम्भीर नै भयो भने सरकारले बलपूर्वक काठमाडौं ल्याएर भए पनि उपचार गराउँछ । डा. केसीको जीवन रक्षा गर्न सरकार प्रतिवद्ध छ ।’
डा. केसीलाई स्वास प्रस्वासमा कठिनाई भइरहेको छ । लगातार अनसन बसेका कारण डा. केसीको शरीर निकै कमजोर भएकाले यो पटक ६/७ दिनमा नै गलेका छन् । त्यसमाथि जुम्लाको चिसो पनि उनका लागि खतरा बनेको छ ।
सरकारले डा. केसीसँग वार्ता गर्ने तर, विरामी अवस्थामा सम्वाद नगर्ने प्रष्ट पारेको छ । तर, जुम्लामा वार्ता नगर्ने भन्दै शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले डा. केसी काठमाडौं आउनुपर्ने बताए ।
पोखरेलले भने, ‘विगतमा डा. केसीको टिमसँग सहमति हुँदा पनि उहाँले मान्नुभएन । मेडिकल एसोसिएनसँग वार्ता गरेर पनि भएन । त्यसैले उहाँ काठमाडौं आउनुपर्छ र उपचारपछि वार्ता गर्न सरकार तयार छ ।’
प्रतिबन्ध कुनै हालतमा हुन्न
बैठकमा प्रधानमन्त्री ओली आफ्नो पूर्ववत अडानमा देखिएका थिए । उनले अनसन बसेकै भरमा सरकार निर्णयबाट पछि नहट्ने प्रष्ट पारे ।
स्रोतले अनलाइनखबरसँग भन्यो, ‘प्रधानमन्त्री त चिकित्सा शिक्षा आयोग नै बनाउन आवश्यक छैन भन्दै हुनुहुन्थ्यो, बल्लतल्ल त्यसमा उहाँलाई सहमत गराउन सफल भएका छौं ।’
तर, काठमाडौं उपत्यकामा १० वर्षसम्म मेडिकल कलेज खोल्न नपाइने तथा एउटा विश्वविद्यालयले ५ वटा मेडिकल कलेजलाई मात्र सम्बन्धन दिने अध्यादेशको व्यवस्थालाई निरन्तरता नदिने बैठकमा सहमति जुटेको छ । नेकपानिकट एक नेता भन्छन्, ‘माथेमा कार्यदलकै कतिपय सदस्य बैठकमा हुनुहुन्थ्यो । उहाँहरुले नै सम्बन्धन होइन, आशयपत्र नदिने मात्र भनेका हौं भन्नु भएको छ ।’
आशयपत्र खारेज गर्ने तयारी
काठमाडौं उपत्यकामा १० वर्षसम्म मेडिकल कलेज खोल्न रोक लगाउने व्यवस्था हटाउँदा सरकारमाथि मेडिकल व्यवसायीहरुको प्रभावमा परेको आरोप लागेको छ ।
तर, शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले संसदमै उभिएर यसको खण्डन गरेका छन् । कसलाई सम्बन्धन दिने नदिने भन्ने अधिकार चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई दिएको भन्दै उनले आयोगमाथि विश्वास गर्न आग्रह गर्दै आएका छन् ।
बालुवाटार बैठकमा सरकारमाथि लागेको आरोप खण्डन गर्ने उपायबारे छलफल भएको थियो । त्यसमा आशय पत्र लिएर लामो समयसम्म पनि पूर्वाधार निर्माणलगायतका काम नगरेका प्रस्तावित मेडिकल कलेजहरुको आशय पत्र खारेज गर्ने सहमति जुटेको छ । एक सहभागीले अनलाइनखबरलाई भने, ‘यसले सबैलाई मेडिकल कलेज दिन खोन्यो भन्ने आरोप खण्डित गर्छ ।’
यसो गर्दा उपत्यकामा मनमोहन मेडिकल कलेजले मात्र सम्बन्धन पाउने अवस्था हुन्छ । अन्य मेडिकल कलेजले पूर्वाधार लगायतको मापदण्ड पूरा गरेका छैनन् ।
यस्तै नेकपाका नेताहरुले चाहेको झापाको बीएण्डसी मेडिकल कलेजले पनि सम्बन्धन पाउनेछ । जबकी चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशको हुबहु विधेयक ल्याउने हो भने दुबैले सम्बन्धन पाउन सक्दैनन् । मनमोहन मेडिकल कलेजलाई १० वर्षे प्रतिबन्धले रोक्ने छ भने बीएण्डसीलाई एउटा विश्वविद्यालयले ५ मेडिकल कलेजलाई मात्र सम्बन्धन दिने प्रावधानले छेक्नेछ ।
विप्लव नेतृत्वको नेकपाद्वारा सरकारसँग वार्ता नगर्ने घोषणा
संविधानको चर्को विरोध गर्दै जनकपुरमा सिके राउतको सम्बोधन, प्रहरी रमिते बन्यो
मधेश स्वतन्त्र गठबन्धन (सिके राउत) का ५० कार्यकर्ता पक्राऊ
गृहमन्त्रीले यसरी खोले विप्लव र प्रकाण्डको चन्दा डायरी, कसले कति दिए चन्दा ?(सूचिसहित)
असाेज तीनलाई ‘कालो दिवस’ का रुपमा नमनाउन फोरमको निर्देशन
प्रधानमन्त्री ओलीले भने- “निर्मला राष्ट्रकै छोरी हुन्, कुनै पनि हालतमा न्याय दिलाउछौ”
संविधानको विरोधमा मधेसमा ‘ब्लाक आउट’, फोरमका मन्त्रीलाई नैतिक संकट !
असोज ३ जनकपुर– २ नम्बर प्रदेशको राजधानी जनकपुरधाममा आधा घण्टा ‘ब्ल्याक आउट’ गरिएको छ । संविधान दिवसको बिरोधमा जनकपुर बुधबार साँझ ७ बजे देखि ७.३० बजेसम्म आधा घण्टा अँध्यारो पारिएको थियो । राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालले बुधबार साँझ सात बजेदेखि साढे सात बजेसम्म संविधान दिवसको बिरोधमा ‘ब्ल्याक आउट’ गर्न जनतालाई...
साढे ३३ किलो सुन अझै भेटिएन, आरोपित प्रहरी धमाधम छुट्दै
केशवराज जोशी काठमाडौं, असोज ३- गत माघ पहिलो साता यूएईबाट आएको साढे ३३ किलो सुन गायब र त्यससँगै जोडिएर भएको सनम शाक्य हत्या प्रकरणको अनुसन्धान अझै सकिएको छैन । अहिलेसम्म न हराएको सुन भेटिएको छ न त सुनका मुख्य लगानीकर्ता नै भेटिएका छन् । ३३ किलो सुन गायब भएपछि सुन...
सोलुखुम्बु बहुमुखी क्याम्पसले मेची महाकाली विश्व अभियान सुरु गर्दै, गिनिज बुकमा नाम लेखाउने
काठमाडौं, असोज ३- सोलुखुम्बु बहुमुखी क्याम्पस स्थापनाको २५ बर्षमा पुगेको उपल्क्षयमा क्याम्पसले मेची महाकाली विश्व अभियान सुरु गर्दै ५ वर्षे महत्वकांक्षी योजना सार्वजनिक गरेको छ । काठमाडौंमा एक विशेष कार्यक्रम गरी क्याम्पस प्रमुख उद्धवकुमार शर्माले ५ वर्षे महत्वकांक्षी योजना सार्वजनिक गरेका हुन् । जसमा १०१ सदस्य रहने जानकारी गराएका छन...
जातीय विभेद गर्नेलाई अब २ बर्ष सम्म जेल सजाय र २ लाख सम्म जरिवाना
वडाध्यक्षको मस्ती : अर्कैको श्रीमतीका काखमा आपत्तिजनक अवस्थामा रङ्गे हात भेटिए
कुवेतमा सवारी दुर्घटनामा एक नेपालीको मृत्यु
प्रकाण्डकै घरमा कोसेली बोकेर पुग्यो प्रहरी, बहिनीको प्रश्न: जनयुद्धमा दाजुभाइ गुमायौँ, हामीले के पायौँ ?
साँस्कृतिक मञ्चको तिज बिशेष कार्यक्रमको तयारी पुरा
आज कुसे औंसी, बुबाको मुख हेर्ने दिन
साफ च्याम्पियनसीपमा नेपाल विजयी, सेमिफाईनल पुग्ने नेपालको सम्भावना
अल्टिच्युडको हेलिकप्टर दुर्घटना ग्रस्त अवस्थामा नुवाकोटमा फेला
कुवेतको कोमामा रहेका गणेश स्वदेश फर्किए, म्याग्दी मोनाद्धारा आर्थिक सहयोग
मलेसियामा विषाक्त रक्सी पिउँदा चार नेपाली सहित सातको मृत्यु (भिडियोसहित)
ढिला आएको भन्दै शिक्षकले कुटेर विद्यार्थीको कान फुटाइदिए
बिन्दास प्रियंकाको उमेर ढल्किँदै तर फिगर जिरोमा परिणत
नेपाल मोडलिङ संघको सर्जक सम्मान सम्पन्न ! को-को भए सम्मानित ?
अमेरिकामा काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यलाई सम्मान सहित स्वागत
डलरको भाउ ११७ रुपैयाँ नाघ्यो, नेपाली रुपैयाँ अहिलेसम्मकै कमजोर, यस्तो छ विदेशी मुद्राको भाउ !
मलेसियामा विशाक्त मदिरा सेवन प्रकरण: रुपन्देहीका रामकुमारको पनि ज्यान गयो